GeekBench စာရင်းမှာ Specs တွေပေါ်လာခဲ့တဲ့ ZTE nubia Z18 – DigitalTimes.com.mm
GeekBench စာရင်းမှာ Specs တွေပေါ်လာခဲ့တဲ့ ZTE nubia Z18
ZTE ကနေထွက်လာဖို့ရှိတဲ့ Nubia ဖုန်းလေး၂လုံးအကြောင်း သတင်းတွေလည်းကြားရစပြုနေပါပြီ။ ပုံမှန် nubia Z18 စမတ်ဖုန်းနဲ့အတူ နောက်ထပ် Z18s ဖုန်းကတော့ Notch မပါတဲ့ Display နဲ့ ကျောဘက်မှာ နောက်ထပ် Screen တစ်ခုပါလာမယ့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
အခုလည်း Geekbench စာရင်းမှာ မော်ဒယ်လ်နံပါတ် NX606J ဆိုတဲ့ Nubia ဖုန်းလေးတစ်လုံးရဲ့ ရမှတ်တွေတက်လာပါပြီ။ ပုံမှန်ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ nubia Z18 ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ သူကတော့ Qualcomm Snapdragon 845 chipset ကိုသုံးထားပြီး RAM 6GB, Android 8.1 Oreo နဲ့ပွဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတွေတုန်းကတော့ 5.99-inch Full HD+ display နဲ့ Storage ကလည်း 64GB ဖြစ်မယ်လို့ သိထားရပါတယ်။ 8GB/128GB ဗားရှင်းလည်း ထွက်ဖို့ရှိပြီး ဘက်ထရီပမာဏကတော့ 3,350 mAh ပတ်လည်လောက်ပဲဖြစ်မှာပါ။ ကျောဘက်မှာတော့ 24MP+8MP (dual camera) တပ်ဆင်ထားပြီး ရှေ့ဘက်ကတော့ 8MP ပဲဆက်သုံးထားဆဲပါပဲ။ (အောက်မှာတော့ အရင်လကထွက်ခဲ့ဖူးတဲ့ Nubia Z18 ရဲ့ပုံလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.. May Be Concept device!)
(Previous Rumor News) –> Bezel-less Display ဖြင့်ထွက်လာမယ့် ZTE Nubia Z18
ZTE ကနထှေကျလာဖို့ရှိတဲ့ Nubia ဖုနျးလေး၂လုံးအကွောငျး သတငျးတှလေညျးကွားရစပွုနပေါပွီ။ ပုံမှနျ nubia Z18 စမတျဖုနျးနဲ့အတူ နောကျထပျ Z18s ဖုနျးကတော့ Notch မပါတဲ့ Display နဲ့ ကြောဘကျမှာ နောကျထပျ Screen တဈခုပါလာမယျ့ စမတျဖုနျးတဈလုံးဖွဈပါတယျ။
အခုလညျး Geekbench စာရငျးမှာ မျောဒယျလျနံပါတျ NX606J ဆိုတဲ့ Nubia ဖုနျးလေးတဈလုံးရဲ့ ရမှတျတှတေကျလာပါပွီ။ ပုံမှနျဗားရှငျးဖွဈတဲ့ nubia Z18 ဖွဈဖို့မြားပါတယျ။ သူကတော့ Qualcomm Snapdragon 845 chipset ကိုသုံးထားပွီး RAM 6GB, Android 8.1 Oreo နဲ့ပှဲထှကျလာမှာဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့သတငျးတှတေုနျးကတော့ 5.99-inch Full HD+ display နဲ့ Storage ကလညျး 64GB ဖွဈမယျလို့ သိထားရပါတယျ။ 8GB/128GB ဗားရှငျးလညျး ထှကျဖို့ရှိပွီး ဘကျထရီပမာဏကတော့ 3,350 mAh ပတျလညျလောကျပဲဖွဈမှာပါ။ ကြောဘကျမှာတော့ 24MP+8MP (dual camera) တပျဆငျထားပွီး ရှဘေ့ကျကတော့ 8MP ပဲဆကျသုံးထားဆဲပါပဲ။ (အောကျမှာတော့ အရငျလကထှကျခဲ့ဖူးတဲ့ Nubia Z18 ရဲ့ပုံလေးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ.. May Be Concept device!)
(Previous Rumor News) –> Bezel-less Display ဖွငျ့ထှကျလာမယျ့ ZTE Nubia Z18
ZTE Nubia Z18]
AI နဲ့ Personal Assistant တွေက လူတွေရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုလွယ်ကူလာစေသလဲ?